Bark eNyangeni ngu-Ozzy Osbourne - Izinto Zobugcisa
Bark kwiNyanga yayiyi-albhamu yokuqala ye-studio u-Ozzy wakhululwa ngaphandle kwegitare ekhokelayo uRandy Rhoads, osweleke kwingozi yenqwelo moya kunyaka ophelileyo ngelixa iqela lalikhenketha eFlorida. UJake E. Lee uthathe ikatala.
U-Lee kunye nomdlali we-bass uBob Daisley wabhala le ngoma kunye no-Ozzy, kodwa khange babalwe njengenxalenye yesivumelwano abasenzileyo kunye nenkampani erekhodayo ka-Osbourne. Uluhlu lwealbham lubonisa uOzzy njengomqambi wedwa wazo zonke iingoma, ekungeyonyani kwaphela.
Le ngoma imalunga nengcuka eyayibuya kwabafileyo kwaye ifuna ukuziphindezela. I-archetypes ezothusayo zingumthombo ongaguquguqukiyo wokuphefumlelwa kwe-lyzy ye-Ozzy- ibhendi yakhe iSabatha emnyama yaqanjwa emva kwefilimu eyoyikisayo.
Kwinqaku le-liner le U-Ozzman uyeza , U-Ozzy wabhala: 'Isihloko sale ngoma sivela kwihlaya endandidla ngokuxelela apho umgca wepunch' wawudla i-s-t kunye ne-bark enyangeni. ' Ndibe nelizwi lokuthetha ngale nto kwaye uJake weza ne-riff. Yayiyingoma yokuqala esayibhala kunye. '
UMateyu Daubert-Mequon, WI
Ngo-1983, indoda eneminyaka engama-20 ubudala yaseKhanada egama linguJames Jollimore yathi le ngoma yamnyanzela ukuba ahlabe umfazi kunye noonyana bakhe ababini. Kunyaka olandelayo, abazali bendoda eneminyaka eli-19 ubudala baseMelika bazokumangalela u-Ozzy batyhole ukufa kwakhe 'kwisisombululo sokuzibulala,' ingoma evela kwi-albhamu yokuqala ye-Osbourne ngo-1980.
Kwividiyo, u-Ozzy udlala usosayensi ophambeneyo owenza iyeza eliguquka limenze ingcuka-inguqu yakhe yewolf eyayingumhla kaMichael Jackson kwi 'Thriller' malunga nenyanga, kodwa isiphumo senziwe kwifilimu ka-1981 I-American Werewolf eLondon . Ekhokelwa nguMike Mansfield, yayiyividiyo yokuqala ye-Ozzy.
Ngokuka-Ozzy, kuthathe iiyure ezisibhozo ukwakheka ukumguqula abe sisilo. Uthi le vidiyo yafotwa kwisibhedlele esidala sabagula ngengqondo, kwaye kwigumbi elinye bafumana usana oluchongwe ngembiza.
U-Ozzy wayezama ukubuyisela kwimeko yesiqhelo ngeli xesha. Umfazi wakhe, uSharon, wamenza ukuba aye kwikliniki yaseBetty Ford, eyayingasebenzi. Ekugqibeleni u-Ozzy wahamba kakuhle ngo-1991.
Inguqulelo yeqweqwe iyavela kuqokelelo luka-1999 Umhlaba weWizard: Irhafu ku-Ozzy Osbourne . Iyenziwa yiSanctorum.
Ukuthetha no Iliwa lokugqibela kudliwanondlebe lukaDisemba 2013, uJake E. Lee ukhumbule inkqubo yokubhala ye- Bark Ngenyanga icwecwe. 'Uninzi lwayo yayindim kunye no [bassist] uBob Daisley. Kungenxa yokuba u-Ozzy wayeza kuvela kwaye enze uhlobo lokudlala ngengoma, utshilo.
Ndiyakhumbula ukuba ndandinomkhonto othi 'Bark At the Moon' kwaye ndadlala loo nto, wathi, 'Owu, ndiyayithanda-siya kuyibiza ngokuba' yiBark Ngenyanga ', kuba wayesele enayo isihloko secwecwe engqondweni, 'uqhubeke uLee. 'Uye wathi,' Nguye lo uzakuba 'Bark Enyangeni. mna noBob. Siza kuhlala kwisitudiyo kwaye sikhuphe iingoma. Kwakumnandi ukusebenza noBob. Wabhala onke amazwi, kwaye ungumculi weengoma. Ke ewe, mna noBob, sinobudlelwane obuhle bokusebenza. Kwakumnandi ukwenza loo ngxelo. '
U-Ozzy ucule le nto ngexesha lokusithwa kwelanga yinyanga ngoAgasti 21, 2017 kumboniso owawuseCarterville, eIllinois, owawusendleleni yetotali. Ilanga laphela njengoko u-Ozzy ebhomboloza.
I-albhamu yase-US kunye ne-UK ineziqweqwe ezahlukeneyo kunye neendlela ezimbalwa ezahlukeneyo.
UTommy Aldridge wadlala igubu kulo mzila, kodwa uCarmine Appice, owayesandula ukujoyina iqela lika-Ozzy, wabetha izikhumba kwividiyo.
Awundazi amazwi ray charles
ehlathini ihlathi elinamandla iingoma
Amakhwenkwe aselwandle ndifuna ukugoduka
akukho ukuphumla kohlobo olubi
oooh wayeyindoda enethamsanqa
Ininzi indlela ekusafuneka sihambe kunye nexesha elifutshane lokufika apho